Umhlinzeki Wakho Othembekile We-Laser Cutter, Izixazululo Ze-Laser Ezobuchwepheshe
Ukuhlolwa Kwezinto Ezibalulekile
Yenza kube lula ukukhiqizwa kwe-Sublimation
>> Hlola okwengeziwe
Izinto Zakho Eziphrintiwe
Ifomethi ye-Laser Cutter Enkulu
I-Sublimation Laser Cutter
Ngaphakathi kwamamitha angu-3.2 Ububanzi
Ikusasa Laser Cutting
I-MimoWork igxile ekuklameni izixazululo ze-laser zokucubungula izinto ezingezona ezensimbi emkhakheni wezokukhangisa, ezezimoto nokundiza, imfashini nezingubo, ukuphrinta kwedijithali, imboni yendwangu yokuhlunga, njll.
Sinikeza imishini yokusika eyenziwe ngokwezifiso nekhethekile ye-laser yezinhlobonhlobo zezimfuno zokwandisa ukusebenza nokukhiqizwa kwamakhasimende ethu.
I-Contour Laser Cutter 160L
Indlela elula yokusika yemikhiqizo ye-sublimation kadayi.
Ukutholwa kwekhonsathi yohlaka olunembile kanye nokusika okunembile kwekhonta kunoma iyiphi iphethini nomumo.
Ukusebenza kahle okuphezulu okuzenzakalelayo kokuphakelayo, ukuthatha izithombe nokusika i-contour.
Ingcweti Yezinto Ezivumelanayo Zokusika.
Noma yikuphi ukuhlanekezela noma ukunwebeka kungabonwa yi-Mimo Contour Recognition System futhi izingcezu eziphrintiwe zizosikwa ngosayizi nokuma okulungile.
Umklamo womzimba ofakwe ngokugcwele unquma isiqinisekiso sokuphepha ekukhiqizeni okusika
Kuhlanganiswe nesivinini esikhulu, ukusebenza okuthembekile, nezici ezifanelekayo, ukucubungula okuguquguqukayo kwe-oda ngalinye.
Umshini wezinga lokungena ongcono kakhulu wezinto eziqinile ezinefomethi enkulu.
I-R&D yokucubungula i-acrylic nezinkuni.
Ivumela ukulayishwa nokulayisha okungakhawulelwe.
Isivinini esikhulu nokusika ngokunemba.
Inketho engenakuqhathaniswa yokusika izinto eziguquguqukayo.
Amakhanda e-laser amabili ahamba ngokuzimela, aphinda kabili ukusebenza kahle kwakho (uyazikhethela).
I-Nesting Software igcina okokusebenza kwakho ngezinga elikhulu kakhulu.
Ukusika ngokuqhubekayo ngokudla okuzenzakalelayo.
I-Flatbed Laser Cutter 250L
Ilungele ukusika indwangu yobuchwepheshe.
Umsebenzi onamandla udala ukuguquguquka okungapheli.
Ubuchwepheshe bokuphrinta be-ink-jet abangaxhumene nabo (ongakukhetha).
Usayizi wetafula elikhulu lokusebenza ungenziwa ngendlela oyifisayo.
I-Galvo Laser Umqophi & Umaka 40
Ilungele ukumaka noma ukuqabula izinto zokusebenza ezingezona ezensimbi njengefilimu yokudlulisa ukushisa.
I-3D Dynamic focus iphula imikhawulo yezinto.
Ukumakwa kwe-laser okundizayo ukwakha umugqa wokuhlanganisa (uyazikhethela).
Ukubonisana ngaphambi kokuthengisa kubalulekile ukuze ufunde mayelana nezidingo zakho ezithile.Lowo evumelana nawe iyona engcono kunazo zonke!
Imishini ye-laser ye-MimoWork ihlanganisa izimfuno ezahlukahlukene ezivela emikhakheni ehlukahlukene.
Izinketho ze-laser ezengeziwe nezisebenzayo ziyatholakala ngokuhlukahluka kwezidingo ezenziwe ngokwezifiso.
I-MimoWork Service idlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukusebenza okuthembekile kwemishini yethu ye-laser ukuze ikhasimende lethu lihlale lizizwa lihlukile.
Ithimba le-MimoWork Service lihlala libeka izidingo zamakhasimende ethu ngaphezu kwezethu kusukela esigabeni sokuqala sokuhlola impahla kuye ekuqalisweni kwesistimu ye-laser.
Buka Zonke Izinto
Iminyaka engama-20, iMimoWork inikezelwe ukusunduza
imikhawulo yobuchwepheshe be-laser ngebhizinisi elisha
Buka Zonke Izicelo
Ukusika Isiqephu Nge-MimoWork
Isitayela Se-Laser Cut Patch Izingubo Zakho Zemfashini Ngeziqephu Zokusika Ze-Laser Zingasetshenziswa cishe nanoma yini osuzoyibona, okuhlanganisa amajini, amajazi, izikibha, ama-sweatshirts, izicathulo, ojosaka, ngisho namakhava efoni.Ba...
Yenze Kwenziwe ngesikhathi esisodwa Ngokuqoshwa kwe-Laser PCB
Yenze Kwenziwe ngesikhathi esisodwa nge-Laser PCB Etching PCB, inkampani yenethiwekhi eyisisekelo ye-IC (I-Integrated Circuit), isebenzisa imikhondo yokuqondisa ukuze ifinyelele ukuxhumana kwesekethe phakathi kwezingxenye ze-elekthronikhi.Kungani kuyikhadi lesekhethi eliphrintiwe?i-condu...
Laser Umqophi VS Laser Cutter
Yini eyenza umqophi we-laser wehluke kumsiki we-laser?Ungawukhetha kanjani umshini we-laser wokusika nokuqopha?Uma unemibuzo enjalo, cishe ucabanga ukutshala imali ku-laser...
Izinyathelo Zokufaka Iqhwa Zesistimu Ye-Laser ye-CO2 Ebusika
Isifingqo: Lesi sihloko sichaza ngokuyinhloko isidingo sokugcinwa komshini wokusika i-laser ebusika, izimiso eziyisisekelo nezindlela zokugcinwa, indlela yokukhetha i-antifreeze yomshini wokusika we-laser, kanye nezindaba ezidinga ...
Zitholele I-Laser Technology nge-MimoWork
uyafuna ukwazi okwengeziwe ngezibani zesimanje?
Bese ubhalisela i-newsletter yethu.